दीपावलीमा लक्ष्मी पूजाको महत्व के छ ? यी हुन पुज्ने विधि !! | सुदुरपश्चिम खबर
दीपावलीमा लक्ष्मी पूजाको महत्व के छ ? यी हुन पुज्ने विधि !!
सुदूरपश्चिम खबर प्रकाशित : कार्तिक १८, २०७८ 39
हिन्दु धर्मावलम्बीहरूको दशैं पछिको सबैभन्दा ठूलो पर्व तिहारलाई मान्ने गरिन्छ । तिहारलाई भाइटिका पनि भन्ने गर्छन्।
कार्तिक कृष्णपक्षको त्रयोदशीदेखि शुक्लपक्षको द्वितीयासम्मका पाँच दिनलाई यमपञ्चक भनिन्छ। यो बर्षपनि नेपाली पात्रो अनुसार कार्तिक २८गते काग तिहार सुरु भई मंसिर १ गते भाइटिका परेको छ।
यस बीचका देवता यमराज भएकाले यी पाँचै दिनमा यमराजलाई घरको ढोकाबाहिर तुलसाको मोठ छेउमा सन्ध्याकालमा दीपदान गरिन्छ। यमपञ्चकको पहिलो दिन कागको पुरा गरिन्छ र दोस्रो दिन कुकुरलाई पूजा गरेर भोजन गराइन्छ।
तेस्रो दिनमा धनधान्यकी देवी लक्ष्मीको पूजा गरिन्छ भने चौथो दिन गाई–गोरुको पूजा, गोवर्धन पर्वतको पूजा र पाँचौं दिन दिदीभाइको आपसमा पूजा गरी सप्तरंगी टीका लगाएर खुसियाली मनाइन्छ। यस दिन पनि साँझमा यमदीपदान गरेर यमपञ्चक अर्थात् तिहार सिद्धिएको मानिन्छ। यी पाँच दिनमध्ये लक्ष्मीपूजा र भाइटीकाको दिनलाई विशेष महत्त्वका साथ लिने गरिन्छ।
धनधान्य, सौभाग्य आदि प्राप्तिका लागि कार्तिक कृष्णपक्ष औंसीको दिन लक्ष्मीको पूजा गरिन्छ। परा, अपरा गरी दुई प्रकारका विद्या प्राप्ति गर्नु पनि लक्ष्मीपूजा नै हो।
यस दिन प्रातः उठेर नित्यकर्म गरी दिनभर लक्ष्मीको उपवास बसेर सन्ध्याकालमा स्नान गरी लक्ष्मीको पूजा गर्नुपर्दछ। सुसज्जित मण्डपमा सुरुमा दीप–कलश–गणेश पूजा गरिन्छ।
यस दिन विशेष रूपले गणेश, इन्द्र, कुबेर र लक्ष्मीको स्थापना गरी प्राण प्रतिष्ठापूर्वक पूजन गर्नुपर्दछ। मण्डप निर्माण गर्न नसके पनि पूजास्थानमा तामा वा काँसको थालीमा अष्टदल लेखी अष्टदलको बीचमा लक्ष्मीको सुवर्णप्रतिमा स्थापना गर्नुपर्दछ।
यसैगरी धन्तेरसको दिन पनि लक्ष्मीको विधिपूर्वक पूजाआजा गरिन्छ । हिन्दु धर्ममा हरेक देवताको निश्चित चिह्न , पदार्थ, फूल, विरुवा, पात, खानेकुरा, चरा, जनावर सम्बन्धित भएको देखाएको छ।
यो सम्बन्धको विशेष महत्व छ । यी सम्बन्धित कुरा शुद्ध र पवित्र पनि मानिन्छ । यसले देवीदेवतालाई प्रशन्न पार्ने काम पनि गर्छ । लक्ष्मीसँग कुनकुन कुरा सम्बन्धित छ त ? लक्ष्मीले कमलको फूल निकैनै मनपराउनुहुन्छ । लक्ष्मीको आफ्नो आसनमा मात्र होइन दुवै हातमा कमलको फूल हुन्छ।
यसैगरी कमलको कोपिलालाई माला बनाएर लगाउनुहुन्छ । यही कारणले गर्दा कमलको फूललाई पवित्र मानिन्छ। लक्ष्मीलाई खुसी पार्ने सबैभन्दा ठूलो कुरा कमलको फूलनै हो।
कार्तिक कृष्ण औँसीको दिन घरलाई सफासुग्घर पारेर लिपपोत गरी दीपावली गरेर लक्ष्मी पूजा गर्दा धनधान्यले परिपूर्ण भई आरोग्य प्राप्त हुन्छ भन्ने जनविश्वास छ । यसैगरी धन्तेरसको दिन पनि लक्ष्मीको विधिपूर्वक पूजाआजा गरिन्छ ।
हिन्दु धर्ममा हरेक देवताको निश्चित चिह्न ,पदार्थ,फूल,विरुवा,पात,खानेकुरा,चरा,जनावर सम्बन्धित भएको देखाएको छ । यो सम्बन्धको विशेष महत्व छ।
यी सम्बन्धित कुरा शुद्ध र पवित्र पनि मानिन्छ् । यसले देवीदेवतालाई प्रशन्न पार्ने काम पनि गर्छ । लक्ष्मीसँग कुनकुन कुरा सम्बन्धित छ त ?
जहाँ प्रकाश हुन्छ त्यहा लक्ष्मी हुन्छिन् भन्ने धार्मिक मान्यता छ । अन्धकारमा कहिल्यै पनि लक्ष्मी आउँदिनन् । त्यसैले तिहारलाई उज्यालो चाड पनि भन्ने गरिएको हो।
लक्ष्मी मातालेले कमलको फूल निकैनै मनपराउनुहुन्छ । लक्ष्मीको आफ्नो आसनमा मात्र होइन दुवै हातमा कमलको फूल हुन्छ । यसैगरी कमलको कोपिलालाई माला बनाएर लगाउनुहुन्छ ।
यही कारणले गर्दा कमलको फूललाई पवित्र मानिन्छ । लक्ष्मीलाई खुसी पार्ने सबैभन्दा ठूलो कुरा कमलको फूलनै हो ।
औँसीको रातमा उज्यालो पार्न दियोको महत्वपूर्ण भूमका हुन्छ । अन्धकारलाई हटाउन दियो बाल्ने चलन वैदिन कालदेखि नै रहेको थियो । त्यसैले दियो लक्ष्मीलाई खुसी पार्ने अर्को चिज हो ।
पहेँलो कौडी लक्ष्मीलाई धेरैनै मनपर्छ । धनी र गरीब सबैले पहेँलो कौडी सजिलै पाउन सक्छन् । लक्ष्मीलाई खुसी पार्न पूजा गर्दा पहेँलो कौडी प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
उल्लुलाई आधुनिक समयमा अपवित्र चरा माने पनि धार्मिक हिसाबले पवित्र मानिन्छ । उल्का वाहिनी लक्ष्मीको विविध नाममध्य एक हो। उल्कावाहिनीको वाहन उल्लु हो । यसरी लक्ष्मीको वाहन भनेको उल्लुलाई दूरदर्शी र बुद्धिमानको प्रतिकका रुपमा लिइन्छ।
लक्ष्मीलाई विभिन्न रुपमा पूजा गरिन्छ तर आठवता लक्ष्मीलाई पुजागर्ने चलन धेरै छ । यी आठओटा लक्ष्मीलाई अष्टलक्ष्मी भनिन्छ । यी लक्ष्मीहरुमा आदिलक्ष्मी, धनलक्ष्मी, धान्यलक्ष्मी, गजलक्ष्मी, शान्तनालक्ष्मी, वीरलक्ष्मी, विजयलक्ष्मी, ऐश्वर्यलक्ष्मी पर्दछन्।
यसैगरी सौभाग्यलक्ष्मी, राज्यलक्ष्मी, गृहलक्ष्मी, वैभवलक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मीलाई पनि पूजा गर्ने चलन छ। लक्ष्मी मन्त्रहरुमा एक सय आठ, एक हजार आठ लक्ष्मीका नामहरु उल्लेख गरिएको पाइन्छ। नयाँ पुस्ता बाट सभार
बैतडीमा कांग्रेस सभापति चतुरबहादुर चन्दले गरे पदभार ग्रहण
खाना नपच्ने र अपच हुने समस्या छ ? यी ६ कारण छन् !
ट्रकको ठक्करबाट कैलालीमा महिलाको मृत्यु